ဦး နှောက်ထဲမှာရောင်ရမ်းခြင်း Fibromyalgia ၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်နိုင်သလား?
30 / 06 / 2019 /0 မှတ်ချက်/i Fibromyalgia/av ရေတံခွန်
ယခုတွင် ဦး နှောက်တွင်ရောင်ရမ်းခြင်းတုံ့ပြန်မှုများတိုးပွားလာခြင်းနှင့် fibromyalgia တို့အကြားဆက်နွယ်မှုတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Fibromyalgia သည်ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းနာတာရှည်နာကျင်မှုလက္ခဏာဖြစ်ပြီးလူအများအပြားဒုက္ခရောက်နေသော်လည်းသုတေသနနှင့်ကုသမှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ရောဂါလက္ခဏာသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင် (များသောအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးသော) နာကျင်မှု၊ အိပ်စက်ခြင်းပြ,နာများ၊ ဦးနှောက်မြူ (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအိပ်စက်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်) ။
ကြာမြင့်စွာကတည်းကရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် fibromyalgia တွင်အချို့သောဆက်နွယ်မှုများရှိသည်ဟုသံသယရှိခဲ့သည်။ သို့သော်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုဘယ်တော့မျှသက်သေပြနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယခုအခါ၊ မက်ဆာချူးဆက်အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံရှိအမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ Karolinska Institute မှဆွီဒင်သုတေသီများသည်ယခင်ကမသိသော fibromyalgia ဒေသတွင်လမ်းပြနိုင်သည့်အခြေခံကျသောသုတေသနလေ့လာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကိုလည်းထောက်ခံခဲ့သည် နောက်ထပ်လေ့လာမှု ဂျာနယ်ထဲမှာ ဦး နှောက်၊ အပြုအမူနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအား.
ကျွန်ုပ်တို့၏အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာသည်ပေါင်း ၁၈၅၀၀ ကျော်မှများစွာသောများစွာသောသဘာဝဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောသက်ရောက်မှုများကိုတင်ပြသည်။ လတ်တလောသုတေသနကအူနှင့် ဦး နှောက်အကြားရှင်းလင်းပြတ်သားသောဆက်နွယ်မှုကိုလည်းပြသသည်။ အတူထောက်ပံ့ငွေကြိုးစားပါ probiotics (ကောင်းသောအူဘက်တီးရီးယား) သို့မဟုတ် Lectinect အစာအိမ်။ များစွာသောသူများအတွက်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ စွမ်းအင်နှင့်စိတ်ခံစားချက်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးသည်သင်မဟုတ်သောခံစားချက်အတွက်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းသိရသည်။
Fibromyalgia ကိုဒူလာအပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကြွက်သားများနှင့်အမျှင်တစ်ရှူးကဲ့သို့သောပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောတုံ့ပြန်မှုများကိုသင်တွေ့မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား fibromyalgia နှင့်အတူတစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အလွန်အကျွံအာရုံခံစားမှုဖြစ်နိုင်တယ် - သောအာရုံကြောအချက်ပြမှုများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ကိုတစ် ဦး အလွန်အကျွံပြန်ပို့ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြသော။ ဆိုလိုတာကအဆင်မပြေတာတောင်မှနာကျင်မှုကိုပိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကသုတေသီများက၎င်းသည် fibromyalgia ရှိသူများတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းများကိုမကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
လေ့လာမှု - သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပရိုတိန်းတိုင်းတာမှု
သုတေသီများသည် fibromyalgia ရှိသူများနှင့်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုတွင်ရောဂါလက္ခဏာများကိုမြေပုံရေးဆွဲခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါကပိုမိုရှုပ်ထွေးရရှိသွားတဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးငယ်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များသို့သွားမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်နားလည်ရန်ခြုံငုံသုံးသပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ထို့နောက်သူတို့က ဦး နှောက်နှင့်ကျောရိုးတူးမြောင်းနှစ်ခုလုံးတွင်အာရုံကြောရောင်ရမ်းခြင်းတိုးပွားလာသည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးအထူးသဖြင့် glial ဆဲလ်များအတွင်းအလွန်အမင်း overactivity ပုံစံဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဤရွေ့ကားဆဲလ်များမှာအာရုံကြောစနစ်အတွင်းရှိအာရုံခံဆဲလ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိပြီးအဓိကလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုရှိသည်။
(အာရုံကြောအမျှင်များပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ myelin အပါအ ၀ င်) အာဟာရတည်ဆောက်ခြင်း
TSPO ဟုခေါ်သောပရိုတင်းတစ်ခု၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုင်းတာသောပုံရိပ်ဖော်ထုတ်ခြင်းရောဂါမှတစ်ဆင့်ဤမြေပုံကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သငျသညျအလွန်အကျွံ glial ဆဲလ်များရှိပါကသိသိသာသာပိုကြီးတဲ့ပမာဏ၌တွေ့သောပရိုတိန်း။
ဒီလေ့လာမှုက fibromyalgia ရောဂါခံစားနေရတဲ့သူတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အချက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ အဲဒါကဒီရောဂါလက္ခဏာကိုနောက်ဆုံးမှာအလေးအနက်ထားခံရဖို့လမ်းခင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကုသမှုအသစ်သို့ ဦး တည်သွားနိုင်သည်
fibromyalgia နှင့်ပတ်သက်သောအဓိကပြyouနာတစ်ခုမှာသင်၏ပြtheနာ၏အကြောင်းရင်းကိုသင်မသိသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသုတေသနသည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းနှင့်အတူကူညီနိုင်သည် - နှင့်အခြားသုတေသီများအားဤအချက်အလက်အသစ်သို့ပိုမိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသုတေသနပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခွင့်အလမ်းအသစ်များကိုပေးသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းသည်ပိုမိုပစ်မှတ်ထားသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ကုသမှုဆီသို့ ဦး တည်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သော်လည်း၎င်းသည်မည်မျှကြာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ငါတို့ fibromyalgia ကကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုမှကြွလာသောအခါအများကြီးအာရုံစိုက်ပေးသောareaရိယာခဲ့ဘယ်တော့မှကြောင်းကိုငါသိ၏။
Fibromyalgia သည် ဦး ခေါင်းကိုအမြဲတမ်းအပြည့်အဝပါ ၀ င်ခြင်းမရှိစေရန် ဦး တည်စေနိုင်သည် - ဤဖိုက်ဘာကိုမြူဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနာကျင်မှုနှင့်မငြိမ်သက်မှုတိုးများလာခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်ကြာမြင့်စွာသံသယဖြစ်ခဲ့ခြင်းများကြောင့်အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်းအပါအ ၀ င်အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိရောင်ရမ်းခြင်းအခြေအနေများကိုလျှော့ချရန်ခန္ဓာကိုယ်သည်အမြဲတမ်းတိုက်လှန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ရေရှည်တွင်အလွန်ပင်ပန်းသည်။
လာမယ့်ကဏ္ two နှစ်ခုမှာတော့စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းဆန့်ကျင်သောအစားအစာ (fibromyalgia diet) ကသင်၏ fibromyalgia ကိုထိန်းချုပ်မှုအချို့ကိုပြန်လည်ရရှိအောင်ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာကိုပိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
fibromyalgia နှင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းအလွန်ခက်ခဲသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးနာနေချိန်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပုံစဉ်းစားပုံသည်သာစိတ်ကူးနိုင်သည်။ သို့တိုင်၊ သင်လုံးဝရပ်တန့်ရန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားသောလေ့ကျင့်ခန်းများကိုအာရုံစိုက်ရန်လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းမှာရွေ့လျားမှုသင်တန်း၊ တော၌လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရွေ့လျားနေခြင်းသည်သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်သောလည်ပတ်မှုအတွက်လည်ပတ်စေသည် - ၎င်းသည်သင့်အားရောင်ရမ်းမှုများကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အားကူညီပေးနိုင်သည်။
အောက်ပါဗီဒီယိုတွင်သင်တီထွင်ထားသောပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်း fibromyalgia ရှိသူများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုတွေ့နိုင်သည် chiropractor အလက်ဇန်းဒါး Andorff. ဤသည်သည်သင့်အားအရေးကြီးသောနောက်ကျောနှင့်အဓိကကြွက်သားများကိုခိုင်မာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။ သို့မှသာတိုးတက်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်သွေးလည်ပတ်မှုရှိနိုင်သည်။
Fibromyalgia နှင့် Anti-inflammatory Diet
fibromyalgia တွင်ရောင်ရမ်းခြင်းတုန့်ပြန်မှုတုန့်ပြန်မှုသည်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်ကိုယခုအခါလူသိများလာပြီဖြစ်သောကြောင့်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖိနှိပ်သောအစားအစာများကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါး၌အစားအစာအချို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရောင်ခြင်းကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းအရင်းနှင့်အခြားသူများကရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည့်အကြောင်းများကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။ fibromyalgia နှင့်အတူမည်သူမဆိုများအတွက်အကြံပြုဖတ်ရှုခြင်း။
fibromyalgia သည် hypersensitivity (နာကျင်မှုအချက်ပြမှုတိုးများလာခြင်း) နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းတုံ့ပြန်မှုများသို့ ဦး တည်သည်ကိုသိသောကြောင့်၎င်းသည်အခြားလူများထက်ကုသမှုပိုမိုလိုအပ်သောလူနာအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်နားလည်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤလူနာအုပ်စုသည်နာကျင်မှုဝေဒနာရှင်များပိုမိုသုံးစွဲမှုများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ရူပဗေဒကုထုံးပညာရှင်နှင့်ကုထုံးပညာရှင်တို့နှင့်အတူ musculoskeletal လေဆာကုထုံး၊ အနှိပ်နှင့်ပူးတွဲစည်းရုံးခြင်းစသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုနည်းလမ်းများရှိသည်။
လူနာအတော်များများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ဟုထင်မြင်သည့်မိမိကိုယ်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် compression support နှင့် trigger point ball များ၊ သို့သော်အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့် ဦး စားပေးမှုများလည်းရှိသည်။
အဆစ်နှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှုအတွက်အကြံပြု Self- အကူအညီ
Arnica မုန့် သို့မဟုတ် အပူအေးစက် (ဥပမာအားဖြင့် arnica cream သို့မဟုတ်အပူအေးစက်ကိုအသုံးပြုပါကလူအများအပြားနာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည်)
- လူအများစုတို့သည်ခိုင်မာသောအဆစ်များနှင့်ကြွက်သားများကြောင့်နာကျင်မှုအတွက် Arnica cream ကိုသုံးကြသည်။ ဘယ်လိုပုံအကြောင်းထပ်မံဖတ်ရှုရန်အပေါ်ကပုံကိုနှိပ်ပါ arnicakrem သင်၏နာကျင်မှုအခြေအနေကိုသက်သာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးအားလူမှုရေးမီဒီယာများ (သို့) သင်၏ဘလော့ဂ်မှတဆင့်မျှဝေရန်သင့်အားတောင်းဆိုပါသည် (ဆောင်းပါးနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ) သက်ဆိုင်ရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများလည်းပြုလုပ်သည်။ နားလည်ခြင်း၊ အထွေထွေဗဟုသုတနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်းသည်နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါခံစားနေရသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်ဘဝဆီသို့ ဦး တည်သည့်ပထမဆုံးအဆင့်များဖြစ်သည်။
ရင်းမြစ်: fibromyalgia အတွက် ဦး နှောက် glial activation - Multi- site ကို positron ထုတ်လွှတ် tomography စုံစမ်းစစ်ဆေး။ 2019 ။
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/betennelse-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2019-06-30 09:51:522021-03-24 10:55:42Fibromyalgia သည် ဦး နှောက်တွင်ရောင်ရမ်းခြင်းတုန့်ပြန်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်
Polymyalgia အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းအကြောင်းသင်ဘာတွေသိထားသင့်လဲ အူအတွင်းဤကွဲပြားခြားနားမှု fibromyalgia ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်